Macalin Conte Iyo Ku Xigeenkiisii Oo Ganaax Culus La Dul Dhigay Kadib Fadeexad Cusub Oo Farsameyn Ciyaar
Tababare Antonio Conte ayaa la ganaaxay 10 Bil oo xiriir ah kadib markii lala xiriiriyay fadeexada qamaarka ciyaaraha xilligii uu tababare u ahaa kooxda Siena ka hor inta uusan noqon tababaraha Juventus.
Marka laga soo tago Conte ayaa sidoo kale gacan yarihiisa uu ku dhaarto oo ah ku xigaha tababaranimo ee Juventus Mr Angelo Alessio ayaa isna 8 bilood la ganaaxay, halka kooxaha Grosseto iyo Lecce laga riday Seria B oo hoos loo sii dhaadhiciyay markii iyagana lagu helay ciyaar farsameynta qamaarka.
Ganaaxan Conte ayaa dhabar jab weyn ku ah isaga iyo weliba kooxdiisa Juventus oo muddo dheer kadib kor usoo kacday korna u qaaday horyaalka Talyaaniga ee Seria A Champions iyaga oo aan marna laga adkaan.
Juventus maamulkeeda ayaa ku tilmaamay ganaaxan mid xaq daro ah meelna looga dhacayo kooxdan oo inta badan lala eegto qiyaano iyo dhabarjabin waa sida ay sheegteene, waxaana ku socda weli baaritaan oo xitaa laba kamid ah xidigahooda la sheegay inay xor yihiin hada kadib baaritaan dheer kadib oo ay xiriirka kubada cagta Talyaaniga FIGC iyo maxkamadu ku hayeen Peppe iyo Banucci.
6 sano kahor ayey ahayd markii Juventus loo dhaadhiciyay Seria B markii lagu helay fadeexadii Calciopolli oo hareysay kubada cagtii Talyaaniga oo markaa garsoorayaal ku lug lahaayeen qiyaanooyinka ciyaaraha.
Deeyoo_admin@hotmail.com Oslo / Norway	Latest News